बिवाहकै दिन मुसिकोटमा निभेको इन्स्पेक्टर जोडीको सम्झनामा, सबैकाे आँखा रसाएकाे दिन अझै भक्कानो छुट्छ! – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > बिवाहकै दिन मुसिकोटमा निभेको इन्स्पेक्टर जोडीको सम्झनामा, सबैकाे आँखा रसाएकाे दिन अझै भक्कानो छुट्छ!
बिवाहकै दिन मुसिकोटमा निभेको इन्स्पेक्टर जोडीको सम्झनामा, सबैकाे आँखा रसाएकाे दिन अझै भक्कानो छुट्छ!
admin January 22, 2019 Uncategorized	0
रुकुम । नवीन श्रेष्ठ र अनिता प्रधान श्रीमान् श्रीमती थिए । उनीहरु दुवै प्रहरी निरीक्षक हुन् । सडक दुर्घटनामा परी दुवैको मृत्यु भएको एक वर्षभन्दा बढी पुगेको छ । रुकुम (पश्चिम) मुसिकोट नगरपालिका– ७ साखमा भएको जीप दुर्घटनामा परी २०७४ मङ्सिर ८ गते दुवैको निधन भएको थियो ।
विसं २०७० चैत ९ गते प्रहरी निरीक्षकमा नियुक्ति भई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीमा कार्यरत नवीन २०७४ मङ्सिर २ गते जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रमुख भई सुर्खेतमा आएका थिए ।
विसं २०६९ साउन ४ गते सहायक प्रहरी निरीक्षक पदमा नियुक्ति भएकी अनिता इलाका प्रहरी कार्यालय रानी मोरङमा काम गरेकी थिइन् ।
विसं २०७२ असोज १ मा प्रहरी निरीक्षकमा नियुक्त भई सङ्घीय प्रहरी एकाइ कार्यालय चन्द्रगढी झापामा कार्यरत अनिता केही समयका लागि काजमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा थिइन् ।
प्रहरी तालीम केन्द्र काठमाडौँमा २०७४ साउनमा भएको प्रहरी निरीक्षकको तालीममा दुवै जनाको भेट भएको थियो । यो भेटघाट सहकर्मी, मिल्ने साथी हुँदै जीवनसाथीमा परिणत हुन पुग्यो ।
उनीहरुको २०७४ मङ्सिर ५ गते सुनसरीको इटहरीमा विवाह सम्पन्न भयो । त्यसको भालिपल्ट बिहान इटहरीबाट हिँडेको त्यो जोडी ७ गते साँझ रुकुम (पूर्व) घरमा पुग्यो ।
नवीन र अनिताको त्यो जोडी घरमा पुग्दा घरपरिवार र छरछिमेकको खुशीको सीमा थिएन । सबै जनाले गीत गाइरहेका थिए । नाचिरहेका थिए । कोही स्वागत सत्कारमा लागिरहेका थिए ।
त्यहाँ उपस्थित भएका सबै जनाले नवीन र अनिताको जोडीलाई राधा कृष्णको जस्तो मिलेको जोडी भनेर पनि तारिफ गरेको सुनिन्थ्यो । त्यस रात सबैको नाचगान रमाइलोमै बित्यो ।
उताबाट प्रदेश र सङ्घको चुनावले समय मिच्दैमिच्दै ल्याएको थियो । उनीहरु जतिसक्दो छिटो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्कनुपर्ने थियो । २०७४ मङ्सिर ८ गते बिहानैबाट सबैसँग भेटघाटमा व्यस्त भएका नवीन र अनिताले त्यसै दिन अपराह्न ४ बजे आआफ्नो कार्यक्षेत्रका लागि यात्रा तय गरे ।
साँझकोे ७ बजेको थियो । घरबाट खुशीका साथ बिदाइ भएर कर्मथलोतिर लागेको त्यो जोडी जीप दुर्घटनामा परी अब संसारमै नरहेको भन्ने खबर आयो ।
रुकुम (पश्चिम) मुसिकोट नगरपालिका– ७ साखमा जीप दुर्घटनामा परी उनीहरुको मृत्यु भयो । उक्त दुर्घटनामा उनीहरुलगायत सात जनाको ज्यान गएको थियो । जसमा पाँच जना श्रेष्ठ परिवारका नै थिए ।
एक्कासी सबै खुशी शोकमा परिणत भए । सबैले रुकुम (पूर्व) मा अन्धकारको बादल मडारिरहेको आवास गरे । यस घटनाले रुकुम (पूर्व) मात्र होइन, पूरै देश नै शोकमा डुब्यो ।
बिहे गरेको चार दिनमै एकसाथ एकै ठाउँमा दम्पती मात्र नभई दुई÷दुई जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी गुमाएको थियो, देशले । भर्खरै विवाह गरेका नव जोडीका र घरपरिवारका सारा सपना र खुशी एकै पलमा खोसिए ।
सुन्दाखेरी सपना जस्तै अपत्यारिलो लाग्ने त्यो घटना सबैले स्वीकार्नुपर्ने भयो । किनकी त्यही नै सत्य थियो । यस घटनाले महिनौंसम्म सबैको मनमुटु हल्लाइरह्यो । त्यस्तो अवस्थामा यस घटनाले परिवारमा के बितिरहेको छ भनेर त हामी सजिलै कल्पना गर्न सक्छौँ ।
अहिले उनीहरुको मृत्यु भएको एक वर्ष बितेको छ । उनीहरुकै सम्झनामा परिवारले सिस्ने गाउँपालिका– ६ रुकुमकोट आलामा राधा कृष्णको मन्दिर निर्माण गरेको छ । परिवारद्वारा निर्मित उक्त मन्दिरमा आज र भोलि धार्मिक अनुष्ठानका कार्यक्रम हुने बताइएको छ ।
नवीन श्रेष्ठका बुबा टेकबहादुर श्रेष्ठका अनुसार राधाकृष्ण मन्दिरमा मूल घरबाट मन्दिरसम्मको बाजागाजा भजन कीर्तन, स्वस्तीशान्तिसहित राधाकृष्णको रथयात्रा गरिनेछ ।
धार्मिक प्रवचनसहित भजनकृतन र लाखबत्ति प्रज्वलनलगायत भक्तजनबाट राधाकृष्णको दर्शन र पूजाको काम हुनेछ । उनले भने, ‘मन्दिर मात्र होइन, छोरा बुहारीको सम्झनामा उनीहरुको सालिक पनि बनाएका छौँ, रु नौ लाख ५० हजारको लागतमा मन्दिर र सालिक निर्माण गरेका हौं ।’
यस मन्दिरमा दैनिक पूजापाठका लागि मासिक तलबको व्यवस्था गरी एक जना पुरोहित पनि राख्ने उनले बताए । ‘भक्तजनका लागि यो मन्दिर सधैँ खुला रहने छ’, उनले भने ।
एक शिक्षकका भरमा विद्यालय
सिस्ने गाउँपालिका–४ काँडास्थित प्रगति आधारभूत विद्यालयमा शिक्षक अभावका कारण पठनपाठनमा समस्या भएको छ । कक्षा पाँचसम्म सञ्चालनमा रहेको उक्त विद्यालयमा दुई राहत शिक्षक कार्यरत रहेकामा एक शिक्षकले राजिनामा दिएको नौ महीना पुगिसक्दा पनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।
शिक्षक दरबन्दी रिक्त भएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले गत असार पहिलो साता शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट अनुमति लिने र विज्ञापन गरी शिक्षक भर्ना गर्ने निर्णय गरे पनि एकाइबाट अहिलेसम्म अनुमति पाउन नसक्दा समस्या भएको छ ।
रिक्त रहेको पदमा सिस्ने गाउँपालिका– १ ठूलो सिस्नेमा कार्यरत शिक्षिका सुनिता भण्डारी हमाललाई सरुवा गरेर ल्याउन विद्यालयलाई विज्ञापन गर्ने अनुमति नदिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको आरोप छ ।
राहतमा कार्यरत शिक्षकको सरुवा गर्न नपाइने भए पनि गाउँपालिकाले त्यसविपरीत गर्न खोज्दा बिव्यसले अस्वीकार गरेको बताइएको छ ।
गाउँपालिकाको आन्तररिक दरबन्दी मिलान गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेकाले अहिले विज्ञापन गर्ने अनुमति नदिइएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख तीलक गौतमले बताए ।
उता गाउँपालिकाले पनि १५÷१६ वर्ष दुर्गममा काम गरेकालाई राहतकै दरबन्दीमा ल्याउन मिल्ने दाबी गरेको छ । विद्यालयमा अहिले ११४ विद्यार्थी अध्यनरत रहेकामा शिक्षक अभावले उनीहरुको पढाइ प्रभावित भएको प्रधानाध्यापक हिमाल खड्काले बताए । पछिल्लो समयमा गाउँपालिकाले एक करार शिक्षक दिएपछि भने केही राहत मिलेको छ ।
गाउँपालिकाले विद्यार्थी अनुपातका आधारमा शिक्षक कम भएका विद्यालयमा करारमा राख्ने अनुमति दिएपछि यस विद्यालयमा पनि मङ्सिर १ गतेदेखि एक नयाँ शिक्षक राखिएको उनको भनाइ छ । शिक्षक अभावले विद्यालयका सहयोगी कर्मचारीलेसमेत पठनपाठन गराउने गरेको विद्यालयले जनाएको छ ।
आम्मामा! महिलाह पनि कति खतरा! पोखराबाट ३ करोड ठगेर हिडेपछि राजधानीमा यस्तो!
छोरी जिस्काएको भनेर अर बीले झन्डै मा,रेन, “आना नफर जदिद” भन्दै माफी माँगे
पार्किङ् गरि राखिएको दाङकाे बसमा कसले गर्यो आगजनी ?
मलेसियामा प्रवेश गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूका लागि आयो यस्तो कडा नियम!
केहि मिनेटको अन्तरालमा जन्मिएका जु’म्ल्याहा दाजुभाईले एकै’पटक संसार छो’डेर गए
प्रहरी हवल्दार डिउटी हुँदा श्रीमतीले परपुरुष घरमै बोलाएर घर मै गर्थिन मोज, श्रीमान डिउटीबाट घर आउँदा बस्नु पर्थ्यो भोकै (भिडियो हेर्नुुस्)